Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 28/12/2019)
A line tareen cusub ayaa bilaabay, daboolaya Azerbaijan, Turkey, iyo Georgia. line wuxuu daboolayaa badan 820 Kiiloomitir oo caawinaysa dadka freights lagu daro tareenada rakaabka. marka hore, line ka noqon doono ugu horeeyay in ay ku xidhmaan Yurub iyo Shiinaha halka Goldogob Russia. Tareenka ayaa shaqayn doonaan caasimada Azerbaijan ee Baku iyo Tbilisi ee caasimada Joorijiyaan magaalada Kars in Turley. Intaas waxaa sii dheer, Waxaa hoos u dhigi doontaa u waqtiga safarka u dhexeeya Europe iyo Shiinaha. Madaxweynayaashii Azerbaijan, Turkey, iyo Georgia, iyo sidoo kale wakiilo ka socda Midowga Yurub, ka qeyb galay furitaanka line tareenka cusub.
marka hore, line tareenka waxaa markii hore la qorsheeyay si loo bilaabo in 2010 ka dibna 2012. Si kastaba ha ahaatee, ay sabab u tahay line ma marayay Armenia, labada Maraykanka iyo Midowga Yurub ma dhaqaale ahaan gacan ka iyo tan sababtay dib u dhac ah. Intaa waxaa dheer, line soo maraa dalalka hore u lahaa ay xuduudaha xiran in midba midka kale (shukaansi in ay dib ugu Midowgii Sofyeeti).
Kazakhstan ayaa haatan degtay sida 'Silk Road cusub’ iyadoo ay hawlaha xamuulka kordhay intii u dhaxaysay Europe iyo Shiinaha. Taariikh Kazakhstan adeegay sidii dawlad xira Europe, Aasiya, iyo India. Sababta ayaa saarka dhaqdhaqaaqa xamuulka Kazakhstan waa in ay dhimaysa fog ee Europe si Asia by 10,000 kiiloomitir. Intaas waxaa sii dheer, Kazakhstan ayaa ka badan $3 billion on waddooyinka tareenka ay. Tani waxaa ka mid ah $250 milyan oo qaatay on the Khorgos Gateway. albaab Tani waxay u ogolaaneysaa tareenada Chinese in alaabta ay tareenada Yurub wareejiyo fogaado baahida ah in la beddelo khadadka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/new-train-links-asia-europe/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)